Shiineyska oo ka cabanaya faquuq ka dhashay Caabuqa Corona - BBC News Somali
Sammi Yang waxay markii ugu horreysay fahantay inay wax khaldan yihiin kaddib markii ay tagtay isbitaalka ay dhakhtaraddeeda ku sugan tahay ee magaalada Berlin, waxaana islamarkiiba laga hor istaagay inay gudaha u gasho dhismaha.
Dhammaan bukaannada kale waxay si caadi ah uga galayeen albaabka isbitaalka, halka Ms Yang, oo ah farshaxamiiste ku takhasustay make-up-ka ay ku khasbaneyd inay dhakhtaraddeeda ku sugto bannaanka, xilli uu jiro qabowga daran ee bisha January.
Markii ay dhaktaraddii u timid, hadalkii ugu horreeyay ee ay tiri wuxuu ahaa: "Arrintan ma aha wax kuugu saabsan si shakhsi ah laakiin..."
"Kaddib waxay tir: 'Ma qaabileyno bukaanno Shiineys ah hadda sababtuna waa Caabuqa Corona ee ka dillaacay Shiinaha'," ayey tiri Ms Yang oo la hadleysay BBC-da.
"Wax fursad ah la iima siinin inaan sharraxaad iska bixiyo aana sheego inaan caafimaad qabay." Xitaa mar dhow uma aysan safrin Shiinaha.
Isbuucyadii uu Caabuqa ku faafay dunida, waxaa soo shaac baxday in falal badan oo cunsuriyad ah loo geystay dadka Shiineyska ah ama qof walba oo muuqaal ahaan u eg dadka bariga qaaradda Aasiya".
Iyadoo xitaa taageero naxariis ah loo muujiyay dadka Shiineyska ah ee u dhintay cudurkaas, gaar ahaan geeridii dhakhtarkii digniinta ugu horreysay sameeyay ee Li Wenliang, dadka laga tirada badan yahay ee Aasiya iyo kuwa Shiineyska ahba waxay sheegeen in naceyb loo qabo iyaga iyo cunsuriyad la socota Caabuqa ay la kulmeen.
Cunsuriyadda ka dhanka ah dalka Shiinaha iyo dadkiisaba ma aha mid cusub - naceybka noocaas ah waxaa si weyn loo diiwaan galinayay oo uu jiray muddo qarniyo ah.
Laakiin qaababka kala duwan ee hadda loo wajahay saameynta Caabuqa Corona ayaa daaha ka rogtay sida uu u qallafsan yahay xiriirka uu caalamka wakhti-xaadirkan la leeyahay Shiinaha.
Tusaale ahaan,in qof Shiineys ah loogu yeero "Caabuq" waa arrin aan cusbeyn, dalalka ay dadka Aasiya ku yaryihiinna waxay ka noqdaan bartilmaameed.
Qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa dalalka Faransiiska iyo Australia ayaa horay loogu daabay ciwaanno xanaf leh oo ku saabsan cunsuriyadda ka dhanka ah Shiinaha.
Markii uu soo baxay warka sheegaya in Caabuqa Corona uu ka dhashay suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka duurjoogta ah, waxaa dunida oo dhan qabsaday dacaayadda ku saabsan in dadka Shiinaha ay cunaan wax kasta oo dhaqaaqa.
Shacabka waddamada Qaar, oo ku yaalla isla qaadarrada Aasiya gudaheeda ayaa u ol'oleeyay in ay iska fogeeyaan dadka Shiineyska ah.
Dalalka Singapore iyo Malaysia, boqollaal kun oo ruux ayaa saxiixay codsi dowladda looga doonayo inay dadka u dhashay Shiinaha ka mamnuucaan soo galista waddamadooda. Dowladaha labada dalba waxay hirgaliyeen nooc mamnuucis soo galitaan ah.
Dalka Japan qudhiisa ayaa dadka Shiineyska ah laga dhaleeceeyaa, waxaana lagu tilmaamaa "Argagixisada dhinaca caafimaadka".
The discrimination has also triggered an anti-racist pushback, as seen in this Italian graffiti that reads: 'There is an epidemic of ignorance around... We must protect ourselves."
'Xushmad iyo xushmad darro wada jira'
Dadka Qaar waxay aaminsan yihiin in nacaybka loo qabo Shiineyska uu sabab u yahay hab dhaqankooda, marka loo eego xasaradda hadda taagan iyo dhibaatooyinkii horay u jirayba.
Dareen guud oo caalamka oo dhan laga qabo dadka u dhashay Shiinaha waa "Xushmad iyo xushmad darro" wada jira", sida uu sheegay Prof Low.
Qaar ka mid ah dadka waxay aad ula dhaceen sida uu Shiinaha ula tacaalay xaalada sida caaqua Corona, iyagoo tusaale ahaan usoo qaadanaya tallaabooyinka deg degga ah, sida in isbitaal weyn lagu dhisay maalmo gudahood.
Laakiin waxaa kale oo ay ku dhaleeceeyeen sida aysan u awoodi karin inay xakameeyaan waxyaabaha qaar, sida ganacsiga hilibka xayawaanka duurjoogta ah.
The proliferation of Chinese tourists around the world has led to higher visibility
Dabcan, adduunka oo dhan isku mid loogama necba dadka Shiineyska ah, sida dalalka Galbeedka Yurub, Mareykanka iyo meelo ka mid ah Aasiya.
Shacabka ku dhaqan dalalka Koonfurta Ameerika, Afrika iyo Bariga Yurub waxay Shiinaha ka arkaan dhanka wanaagsan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baarista ee Pew.
Dowladda Shiinaha ayaa dhankeeda sheegta in waddamada ay cadowga isku yihiin ay siyaasadeeyaan arrimahan.